पातलो कपाल को स्टाइलिश र मोटा केश विजेता सिर्जना गर्न सक्छन् अब स्वतन्त्र effortlessly 10-15 मिनेट को लागि, विशेष चुच्चो लहर धन्यवाद। उनको कपाल धेरै तरिकामा गरेको को मद्दतले: नेत्रहीन केश मूल forceps-पसली वाला वा कपाल को एक पुरा टाउको र व्यक्तिगत किसिमहरु रूपमा सुन्दर स्टाइल छालहरू बनाउन तिनीहरूलाई प्रयोग को मात्रा ठूलो बनाउँछन्।
संडसी लहर बाल: विवरण
को forceps एक विशिष्ट सुविधा लहर वा नागबेली को रूप मा दुई प्लेट को सतह grooved छ। यो तपाईं कपाल मात्रा र मूल नजर दिन अनुमति दिन्छ। Ribbing प्लेट यो सम्भव भएको बाल लहर को इच्छित आकार सिर्जना बनाउँछ जो, सानो मध्यम वा ठूलो हुन सक्छ। यो विकल्प को एक किसिम मा बाल स्टाइल को यो विधि पूरै unnoticed Basal-ribbed चुच्चो प्रयोग को राशि वृद्धि को मामला मा जस्तै, एकदम प्राकृतिक देखिन्छ पनि विचारणीय छ।
को corrugation को इतिहास
यो स्टाइल र कर्लिंग, बाल लागि corrugation प्रविधी नयाँ छैन वास्तवमा छन्, र हाल को वर्ष को आविष्कार। लोकप्रियता र fashionistas बीचमा ती व्यापक प्रयोग पछिल्लो शताब्दीको नब्बे को दशक मा सुरु भयो। असामान्य Hairstyles र उनको मात्रा गर्दा धेरै बालिका मन परायो। केही वर्ष पछि, किनभने बाल, र आफ्नो उपस्थिति मा एक महत्वपूर्ण गिरावट मा हानिकारक प्रभाव को, यसरी फेशन स्टाइल बिस्तारै पारित, र अब मांग मा संडसी-ribbed।
आज, बाल को हेरविचार लागि डिजाइनर र उपकरण को निर्माता नेत्रहीन पातलो कपाल भएका महिलाहरु को लागि Hairstyles को मात्रा ठूलो बनाउँछन् गर्न अनुमति दिन्छ जो संडसी र यस प्रकारका फलाम को मद्दत संग बिछाउने को एक नयाँ विधि विकसित गरेका छन्।
निर्माता को प्लेट को सतह मा छालहरू र zigzags को आकार मा निर्भर गर्दछ, नालीदार कपाल स्टाइल लागि धेरै विकल्प प्रस्ताव। बिछाउने को सबै भन्दा राम्रो विधि चयन गर्न, यो लहर तीन प्रकारका थाहा आवश्यक छ:
पैटी। यो कपाल को Basal मात्रा को गठन को लागि प्रयोग गरिन्छ। यो विधि, चिल्लो पातलो वा क्षतिग्रस्त बाल लागि उपयुक्त छ, र बाक्लो र रसीला लागि उपयुक्त छ। को प्लेट को सतह सानो-लहर र संडसी को नागबेली लहर साधारण सानो आकार (12-17 सेमी) छ।
औसत। यो विकल्प छालहरू सिर्जना बाल वा कुनै पनि प्रकारको र कुनै पनि लम्बाइ को Basal मात्रा को किसिमहरु को लम्बाइ भर को लागि उपयुक्त छ।
ठूलो छ। यस प्रकारका बाल स्टाइल संडसी-लहर तपाईं बाक्लो र लामो कपाल मा फैशनेबल कर्ल र मोटा, सबै भन्दा प्रभावशाली देखिन्छ संग Hairstyles सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
को मद्दतले रूपमा मूल कपाल को मात्रा वृद्धि गर्न forceps-ribbed?
निम्न कदमहरू छन्:
आफ्नो बाल comb र चिल्लो जानेबेलामा बनाउन, एक hairpin माथिल्लो भाग समाधान;
लिनु संडसी सानो किसिमहरु सीधा जरा मा 3-5 सेकेन्ड को लागि, यो, तल र अगाडि कपाल केश अब प्राकृतिक देखिन्छ धेरै शीर्ष crimp गर्न असम्भव हुँदा बारी;
आफ्नो औँलामा संग बाल tweak।
कसरी लहर-सुझाव प्रयोग गरेर कपाल को सम्पूर्ण लम्बाइ बिछाउने बनाउने?
यस मामला मा, निम्न चरण:
ध्यान दिएर एक hairpin समाधान गर्न माथिल्लो Strand, partings बनाउन, आफ्नो बाल comb;
एकांतर कब्जा सानो clumps, नालीदार पैकिंग utjuzhkom को अन्त्य गर्न जरा देखि यो सार्दा, र प्रत्येक साइट मा राख्न कुनै 3-5 भन्दा बढी सेकेन्ड;
एक सानो स्पर्श औंलाहरु संग कर्ल बिछाउने पछि।
तपाईं जब फलाम र संडसी-लहर छनौट जान्नु आवश्यक के?
इस्त्री वा कर्लिंग छनौट गर्दा, corrugation महत्त्वपूर्ण निर्माण को सामाग्री ध्यान छ। दुई पटक एक महिना भन्दा कुनै थप, अन्यथा बाल बिगार्छ सक्नुहुन्छ धेरै चाँडै - एक धातु कोटिंग संग प्लेट कपाल धेरै हानिकारक छ, प्रयोगको अनुमति। कारण कपाल को संरचना मा हानिकारक प्रभाव गर्न, यस्तो उपकरणहरू को मूल्य आकर्षक छन् पर्याप्त। सबैभन्दा forceps सुरक्षित छन्, चीनी माटो प्लेट वा टूमलाइन र आयनीकरण समारोह को उपस्थिति किसिमहरु गर्न क्षति तिरस्कार गर्ने corrugating बचत मोड मा उत्पादन गरिएको छ जो को सतह।
जब इस्त्री वा कर्लिंग-ribbed महत्त्वपूर्ण सूचक छनौट पनि तपाईं सही तापमान चयन गर्न अनुमति दिन्छ डिजिटल थर्मोस्टेट को उपस्थिति छ। यो पातलो र कमजोर बाल 180⁰ माथि तापमान उजागर गर्न पर्छ भनेर सम्झना गर्नुपर्छ।
दोकान संडसी-लहर सुविधाहरूमा
हामी ग्राहक प्रतिक्रिया को आधारमा भविष्यमा प्रयोगकर्ता केही सिफारिसहरू प्रस्ताव:
को 1-2 महिना को कर्लिंग संडसी वा-पसली वाला उपस्थिति र बाल संरचना noticeably बुरा को प्रयोग पछि समाप्ति मा, तिनीहरूले, सुक्खा कडा र निर्जीव फिक्का हुन। यो जोगिन, तपाईं balms र कंडीशनर को एक किसिम, कम्तिमा हप्तामा एक restorative बाल मास्क गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ। पनि स्थापना को समयमा विशेष सुरक्षा स्प्रे वा mousses प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
लहर ड्राई सफा र कपाल मा गरिन आवश्यक छ। भिजेको किसिमहरु बिछाउने adversely कपाल को संरचना असर, चिस्यान राख्ने र तिनीहरूलाई बिगार्न सक्छ।
प्रभाव थाकबनाउदै को स्थिरता वृद्धि र लम्ब्याउनु गर्न, crimping 5-10 मिमी को सानो किसिमहरु आवश्यक छ।
उचित चयन र forceps प्रयोग संग Termopribor-लहर कपाल स्वस्थ नजर, चम्कने, निर्विघ्नता र silkiness प्राप्त।
संडसी लहर Babyliss प्रो Bab 2151E
कपाल को हेरविचार लागि उत्पादन उपकरणहरू नेताहरू को एक, एक फ्रान्सेली कम्पनी Babyliss छ। संडसी लहर बाल Babyliss प्रो Bab 2151E अत्यधिक ठीक बाल को मालिक बीच लोकप्रिय छन्। उपकरण कपाल को एक मोटी टाउको को कपाल र सृष्टिको Basal रकम वृद्धि लागि सिद्ध छ। संडसी, बाल लहर ठीकै पेशेवर उपकरण को लाइक संग तुलना गर्न सकिन्छ।
आकार र केवल 15 सेमी को एक लम्बाइमा सानो, तिनीहरूले पातलो कपाल प्रयोग गर्दा प्रयोगमा maneuverable लामो बाक्लो कपाल लागि उपयुक्त, तर पर्याप्त प्रभावकारी छैनन्। Nanoceramic कोटिंग प्लेट बाल लागि सुरक्षा सिर्जना र आफ्नो क्षति रोक्छ, र टिप अलग बल्न रोक्न मद्दत गर्छ। उपकरणको लाभ पनि हो: छिटो ताप, 1.8 मिटर लामो कर्ड, शक्ति आपूर्ति प्रणाली, जो 120-240 वाट मा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ। कम बिजुली (60 डब्ल्यू) यो मोडेल को बेफाइदा तोकिएको गर्न सकिन्छ।
संडसी Babyliss प्रो Bab 2512EPCE लहर
यो मोडेल बाल को कुनै पनि प्रकार र लम्बाइ लागि उपयुक्त संडसी। EP 5.0 प्रविधि अन्य यस्तै उपकरणहरू भन्दा महत्वपूर्ण लाभ प्रदान गर्दछ। को forceps एक सुविधा कुनै रासायनिक घटक र mikrometallicheskoe छ टाइटेनियम टूमलाइन कोटिंग प्लेट। यो प्रविधि अझ चिल्लो स्लाइड, घर्षण, केश गर्न परिस्कृत सुरक्षा प्रदान गर्दछ र वर्दी गर्मी वितरण कमी छ।
मोडेल को अन्य लाभ समावेश: velor गर्मी सुरक्षा कोटिंग, चमकीले सूचक5तापमान regimes उपस्थिति (120⁰, 140⁰, 160⁰, 180⁰, 200⁰), उच्च शक्ति (125W) लामो कर्ड (2.7 मिटर)। संडसी कपाल को जरा मा स्ट्याकिङ मात्रा दिने र छालहरू सिर्जना लागि पूर्ण छन्।
सबैभन्दा महिलाहरु माथि साधन गर्न सकारात्मक प्रतिक्रिया। यी लाभ प्रयोग को सुविधा र सजिलो, छोटो समयमा, स्टाइलिश मूल र मोटा कपाल को एक किसिम सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता समावेश गर्नुहोस्। साथै, बाल, उपस्थिति चम्कने र निर्विघ्नता को उपस्थिति मा एक सुधार याद सैलून एक यात्रा पछि भने। फलाम र कपाल curlers धेरै प्रयास बिना फरक Hairstyles सिर्जना गर्न दैनिक अनुमति corrugation। उपकरण यस प्रकारको प्रयोग गर्ने महिला, टिप्पणी पनि प्रतिरोधी फर्श परिणाम भनेर दुई दिन सम्म रहन्छ। खरीदारों को राय मा, यसको क्षमताहरु मा forceps र फलाम-लहर केही मोडेल पूर्ण hairdresser एक पदयात्रा प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।
Jacquard coverlets: सुविधा र फोटो
बगैचा Awnings छनौट
"Dura" (प्रदर्शन): समीक्षा, अभिनेता र अवधि
Windows7मा चल: के यो समस्या केही समाधान गर्न तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न र कसरी हुन्छ?
संगठनात्मक डिजाइन: संरचना, सिद्धान्त र प्रयोग कारण
तपाईं सफल छैन फर्नीचर बिना बाँच्न। र तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ भने - त्यसैले, तपाईं पहिले नै यो कठिन विकल्प अगाडि खडा।
छनौट होटल: ग्रीस, Kos